Xiaomi Mi Band 3: Famaritana, vidiny ary fandefasana | Androidsis
Ofisialy io! Ny Xiaomi Mi Band 3 dia efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny marika sinoa tamin'ny hetsika androany. Herinandro lasa izay dia voalaza fa hanao fampisehoana amin'ity hetsika ity izy, ary voamarina izany herinandro lasa izay. Ary farany, isika dia efa afaka nahafantatra izay navelan'ny zandrin'ny taranaka vaovao ho antsika. Taorian'ny fahombiazan'ny taranany teo aloha dia betsaka no andrasana amin'ity bracelet ity.
Ny Xiaomi Mi Band 3 dia tonga hanatsara ny taranaka teo aloha, izay vokatra tsara kalitao. Izy io dia miaraka amin'ny fanovana sasany miavaka amin'ny endrika, fa koa amin'ny endriny. Noho izany dia manana zavatra kely horesahina isika. Inona no azontsika antenaina amin'ny fehin-tànana?
Ny haavon'ny taranaka teo aloha dia avo dia avo, ka ny marika sinoa dia nanana asa handresena azy amin'ity bracelet vaovao ity. Afaka mahita fiovana amin'ny faritra maro isika, ny tena hita maso dia ny maso, miaraka amina endrika misy fanovana.
1 Famaritana Xiaomi Mi Band 3
Famaritana Xiaomi Mi Band 3
Ny fiovana lehibe dia tsy isalasalana fa ao amin'ny tontonana. Ny efijery an'ny Xiaomi Mi Band 3 Izy io dia lehibe kokoa noho ny teo aloha, ankoatra izany, dia efijery fikitika izy ity. Ka afaka mitantana izay ataontsika amin'ny bracelet amin'ny alàlan'ny fihetsika eo amin'ny efijery. Zavatra afaka manome safidy bebe kokoa ho an'ny mpampiasa, ankoatry ny fanaovana izay hampiasana azy hampiadana kokoa. Ho fanampin'izay, azontsika atao ny mahita ny endrika nanjary boribory kokoa ny endrika, manome sary somary hafa.
Nisafidy efijery iray misy ny teknolojia OLED ry zareo. Tokony holazaina ihany koa fa tsy manana rafitra miasa toa ny Wear OS eo amin'ny bracelet isika. Tsy misy tena rafitra fandidiana ao anatiny, fa ny tena izy dia toa tsy ilaina izany.
Raha ny lafiny famolavolana dia efa hitantsika ny fiovana avelan'ity Xiaomi Mi Band 3. Na dia misy fihatsarana kely ihany koa aza amin'ny lafiny famaritana. Ny fiovana lehibe dia ny fanoherana ny rano amin'ny tsindry hatramin'ny 5 ATM. Io dia ahafahantsika mitondra ny bracelet miaraka amintsika amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra tadiavintsika. Mety izao fa ho avy ny fahavaratra ary maro no mampihatra hetsika ivelan'ny trano bebe kokoa.
Fiovana lehibe iray hafa amin'ny Xiaomi Mi Band 3 ny fahatongavan'ny puce NFC. Misaotra azy io fa ho afaka mandoa finday ny mpampiasa miaraka amin'ny bracelet. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy alamina avy amin'ny telefaona finday io fahafaha-manao io, araka ny naseho ny sonia.
Raha tsy izany, ny sisa amin'ireo asa nentim-paharazana dia mbola tsy miova. Fitantanana fampandrenesana, fanaraha-maso ny hetsika ara-batana, fampahalalana voaangona isan'andro, fampahalalana momba ny antso sns. Amin'io lafiny io dia tsy misy fiovana amin'ny fehin-tànana. Inona koa, manana Bluetooth 4.2 izahay, izay hahafahantsika mampifandray izany amin'ny telefaona. Misy ihany koa ny mode detection ho an'ny fampihetseham-batana sy ny torimaso ary ny tahan'ny fo, mandeha ho azy daholo izy rehetra.
Ny Xiaomi Mi Band 3 dia hanome safidy ho an'ny mpampiasa ho an'ny mpampiasa. Amin'ny lafiny iray, ny mpampiasa dia afaka manamboatra ny interface amin'ny alàlan'ny fampiharana amin'ny telefaona. Manana fetra vitsivitsy isika, saingy hanome safidy vitsivitsy hahafahantsika mampiasa azy io akaiky kokoa amin'izay tadiavinay. Ho fanampin'izay, hanana fampahalalana bebe kokoa izahay ary afaka mamaky tsara kokoa amin'ny efijery lehibe kokoa.
Lafiny iray manokana ilaina amin'ny fanaingoana dia ny mety hanovana ny tadiny. Amin'io lafiny io dia tsy nanova na inona na inona ny marika. Ny fehin-tànana dia mbola misy modely izay mifamatotra amin'ny tranga / fehy. Azontsika atao tsara ny manova ny tadiny ary mametraka ilay tadiavintsika amin'ny fotoana rehetra.
Ankoatra izany, azo inoana fa fatorana sy famolavolana vaovao no hampidirina amin'ity lafiny ity. Mba hanomezana safidy bebe kokoa an'ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny fomba tsotra sy mahafinaritra.
Mahita kinova roa amin'ny brasele izahay, ny iray amin'izy ireo no ara-dalàna sy ifotony, fa ny iray kosa ho variant amin'ny chip NFC, no hany mampiavaka azy ireo maodely roa. Raha tsy izany dia mitoetra ho mitovy amin'ny lafiny rehetra izy ireo.
Ny vidin'ny ofisialy Xiaomi Mi Band 3 dia 169 yuan, izay manodidina ny 23 euro no hanovana. Na dia somary lafo kokoa aza ny variant amin'ny NFC, satria ny vidiny dia 199 yuan, ny fiovana dia manodidina ny 27 euro. Ireo vidiny ireo dia azo inoana fa somary lafo kokoa rehefa tonga any Eropa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi Mi Band 3: Ofisialy vaovao amin'ny braseleety izao dia ofisialy